Iyo Metro yeIzmir, Kutakura mazana mashanu ezviuru zveVapfuuri Zuva, Ane Makore Makumi Makumi Gumi | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYTurkish Aegean Coast35 IzmirIzmir Metro, iyo inotakura zviuru mazana mashanu emapasiketi pazuva, ine makore makumi maviri
22 / 05 / 2020 35 Izmir, Railway, Turkish Aegean Coast, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Metro, TURKEY
Izmir Metro, inotakura vanhu vanopfuura chiuru pazuva
Metro, iro hupenyu hwehupenyu hwekufambisa kwevanhu vese muIzmir, ane makore makumi maviri ekuzvarwa. Iyo system yakavakwa neMetropolitan Municipality inotakura vanhu vanosvika hafu yemiriyoni pazuva neetamu.
Izmir Metro, iyo yakatanga kushanda muIzmir muna Chivabvu 22, 2000, yapfuura makore makumi maviri. Meya weMetropolitan Tunç Soyer, akashanyira nzvimbo dzeHalkapınar pazuva rakakosha iri reIzmir Metro, akapemberera zororo revashandi neredhiyo. Vachitaura pano, President Soyer vakati İzmir Metro ndeimwe yemadhorobha edhorobha. Vachitaura kuti chinhu chinoita kuti sangano rirambe riripo ndevashandi vanogadzira masevhisi emhando yepamusoro, Soyer akaenderera mberi achiti: “Naizvozvo, hutano kune imi mose. Ichi chidzidzo chiri zvakare mubato redambudziko re corona munyika yose, kunyanya muIzmir akafamba achiratidza kudzidza muTurkey. MuIzmir Metropolitan Municipality, yega yega zvikamu zvedu inoita zvinhu zvakasiyana. Vamwe vari kusimbisa screws, vamwe vari kuchenesa mugwagwa, vamwe vari kushandisa tramu. Asi kana izvi zvese zvikaungana, kufunga kwe ofzmir Metropolitan Municipality kunoratidzwa. Uye ndinoda kutaura kuti takabudirira kuita izvi. ”
Bronze guta reIzmir, Mutungamiri akabudirira kwazvo weTurkey akataura kuti mumwe weSoyer, akaenderera achiti: "Ndinofanira kuziva. Ndinokukorokotedzai imi mose makapawo pane izvi zvakasiyana. Hutano kune basa rako rese. Tinodada newe. Hupenyu parinotanga kuoma, ndinoshuva kuti isu ticharamba tichishandira nenzira yakanaka zvakare. ”
Munguva yekushanyira kwake Meya Soyer, Secretary General weMetropolitan Municipality, Dr. Buğra Gökçe naSönmez Alev, General Manager weIzmir Metro, vakaperekedzwa.
Ivo vanozobikwa mushure meimwe nguva
Izmir Metro uye Izmir Tram vari kuramba vachishanda mukuitika kwedenda. Mukati meyero yezvimwe zvekuchengetedza kuchengetedza panguva yekuitika kwedenda, kusagadzikana kunoitwa zuva rega rega muchikamu chese chemotokari. Zvekare, nzira dzekuuraya hutachiona dzinoramba dzichiiswa nguva nenguva kuzviteshi zvese nekumira. Iko kuchenesa kwemukati kwemotokari, uko kunocheneswa kunze kwekunze yekuchenesa bhurashi, kunoitwa uchishandisa unonhuwirira wekuchenesa zvinhu zvisingakuvadze hutano hwevanhu, zvakatipoteredza nemarori emidziyo. Mota dzese dzinopihwa kudzidzira kushanda mushure mekufamba nenzira idzi nekudzitarisa. Idzi mota dzinocheneswa uye dzokubvisa hutachiona mushure mekupera kweimwe neimwe nguva mukati mekuvhiyiwa inopihwa kubasa revanhu veIzmir. Kupa basa nemazwi "Isu tange takamirira kwemakore makumi maviri, hatimiriri", vese vashandi kubva kune mutyairi kuenda kune vashandi vanochenesa vanoshanda makumi maviri nematatu kuitira kuchengetedzeka, kugadzikana, kugara uye hutsanana.
Yakatanga netsetse gumi nemana, mashanu-km
Izmir Metro, iyo yakatanga makore makumi maviri apfuura neine mutsara kureba 20 makiromita pane gumi nhepfenyuro iri, yanhasi Konak uye Karşıyaka Pamwe chete nematirangi, inotakura avhareji ye41 zviuru zvevatasvi zuva rega rega, muhuwandu hwemakiromita makumi matanhatu nematanhatu. Izmir Metro uye Izmir Tram inosangana makumi maviri neshanu muzana ezvekutakura vanhu mune rimwe guta. Izmir Metro, iyo yakatanga kushanda nemotokari makumi mana nemana muna500, ine hombo huru yemotokari mazana maviri nematanhatu inosanganiswa nemotokari metro itsva nemoturu mota munguva yakapfuura. Mumakore makumi maviri apfuura, bhiriyoni imwe 24 zviuru zvevatasvi vakatakurwa, zvichienderana ne2000 kune 45 yehuwandu hwepasirese. Ese makumi masere emamirioni makumi mairi emakiromita erwendo kubva pazuva rekutanga rakaenzana nekufamba kutenderera nyika mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nenomwe.
Izmir Railway System Mepu
Zviuru makumi matatu neshanu zviuru zvevatakuri pazuva kubva kuMarmaray, zviuru gumi neshanu pazuva kubva munaJuly 365 Martyrs Bridge
500 Zviuru Vapasi paZuva
Bursa Tram Line Kutakura 7 Zviuru Vanhu Nezuva iri Kuwedzera kune Yalova Road
Kadıköy-Kartal metro inotakura zviuru mazana manomwe zvevatasvi pazuva
Kecioren metro inotakura vanhu vane chiuru pazuva pazuva 50
15 Zviuru Vanhu Vanouya kuErciyes Ski Center
20 zviuru zvevanhu 720 vaifamba nezuva rimwe muAkçaray
3 27 474 Mutakuri Anotakurwa Pazuva
TCDD inotakura vanhu vane 50 vane zviuru pazuva
8 yeTamende Domumusha Silkworm 50 Yakapfuura XNUMX Zviuru Vapasi paZuva
Izmit Tram inotakura 16 vanhu vanofamba zuva nezuva
Gaziantep trams inotakura 60 vane zviuru zvezuva rimwe
120 vane chiuru chevatakuri vachatungamirirwa neTram system muGaziantep
TCDD baba nemwanasikana weC9-year-old havana kupa rutivi-ne--kiti tikiti
500 Zviuru zveVatakuri Gara paKarepe Cable Car
Samray anotakura vane 50 vane zviuru pazuva
GAZİRAY 100 Zviuru Vapasi paZuva Rokufambiswa
150 Zviuru Zvikamu Zvinotungamirirwa neZuva Rino Utano zvakakosha zvikuru muIZBAN